Mety ho an'ny abs ve ny baolina fanafody? - Fanazaran-Tena
Tena > Fanazaran-Tena > Fampiofanana med ball core - Boky Torolàlana feno
Fampiofanana med ball core - Boky Torolàlana feno
Mety ho an'ny abs ve ny baolina fanafody?
Baolina fanafodyhazo fisaka
AtaovyFaritratery, haavon'ny valahana ary soroka miverina sy miverina.5 feb 2016
Salama daholo! I Susan dia mpanazatra avy any ATHLEANXX ho an'ny vehivavy. Androany isika dia hanao fanazaran-tena abs miaraka amin'ny baolina azo antoka. Amin'ity fampihetseham-batana ity dia tiako ianao hanao famerimberenana betsaka araka izay azo atao ao anatin'ny 30 segondra, miala sasatra mandritra ny 15-20 segondra eo anelanelany ary manaova fihodinana telo ka hatramin'ny efatra.
Ka handalo ny fihodinana voalohany miaraka aminareo aho. Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny fanaovana crunch. Mila ny vatanao sy ny lanjan'ny tànanao ianao.
Tsy tokony ho sarotra izy ireo, miankina amin'ny hatsaranao ihany. Ho an'ity fampiharana ity dia hiankina fotsiny amin'ny tampon'ny lamosinao amin'ny baolina ianao. Hihady ny tongotrao amin'ny tany ianao hanakodia ny abs anao rehefa manindry mahitsy ny dumbbells ianao.
Ka izao no ho endriny. Ampidiriko ny tongotro, hipetraka aho ary handroaka. Fitazomana isometrika maivana fotsiny eo amboniny.
Tena zatra ny abs rehefa soloako izy ireo. Manosika anao tsy mila lanja mavesatra be. Averina indray, arakaraka ny haavon'ny hatsaranao.
bisikileta be loatra
Fanazaran-tena voalohany izany. Laharana faharoa: manao rollout iray tongotra izahay. Ka ataonao eo alohanao ny baolina.
Tena hihaika ny votoatinao izany. Hametraka ny tananao amin'ny baolina eto ianao, tadidio fa vonona hampitraka ny tongotra satria handroaka tongotra iray isika. Mihodina ianao, miorim-paka amin'ny tongotra mahitsy ary miverina amin'ny fanombohana.
Afaka mifindra tongotra ianao. Hihorona ianao, tadidio ny hampiakatra kely ny tongotrao ary hikapoka azy ireo koa. Hidina midina ambany aho.
Asandrato. Raha te-hanao sarotra kokoa ianao dia indraindray aho manodinkodina ny baolina amin'ny lafiny iray, saingy manandrana mitazona ny sisa amin'ny vatako ho mahitsy araka izay tratra aho, somary mafy kokoa. Handeha hisosika isika, hihamafy orina isika, hanosika ny baolina hatrany amin'ny lafiny iray, ary hiakatra indray isika hanomboka.
Crunch mihemotra iray tongotra. Mandry fotsiny amin'ny tany. Hametraka ny tongotra iray amin'ny baolina isika.
Ny iray kosa dia mahitsy eny amin'ny rivotra. Hieritreritra ny handavaka kely ny ombelahin-tongony isika amin'ny fanaovana ny antsika. ahodiho ny valahana eo amin'ny tarehinay.
Ka hidina sy hiakatra aho. Izy io dia tsara ho an'ny stabilizers lalina sy ambany abs. Eritrereto indray ny fandatsahana ny tongotsika ao anaty baolina rehefa manao kodiarana pelvika kely isika dia avelantsika hiala sasatra aorian'ny fandalovantsika ny fotoanantsika.
Avy eo hihaona amin'ny lafiny hafa isika. Ny tanjona eto indray dia ny tena mieritreritra ny hahazo koveta kely eo amboniny. Manao fanazaran-tena efatra izahay.
Mandraisa andraikitra. Afaka nijanona teo amin'ny tany ihany izahay, fa namoha anao aho. Ka hapetrantsika eo anelanelan'ny tongotsika ny baolina, tsarovy ny manery azy, ary handray andraikitra isika.
Hasehoko anao ny kinova roa. Ho an'ny kinova fanombohana dia azonao atao ny mitazona ny lamosinao indrindra amin'ny tany. Ary raiso, ary lalindalina kokoa.
Mifantoha amin'ny fampidinanao ny baolina, miadana tsikelikely. Hanahirana kely kokoa ho an'ny vondrona manaraka. Tiako ianao hiala amin'ny tany ny lamosinao.
Raha manana ny toerany tsara ny baolina dia hieritreritra ny ho tonga ianao - diso izany, azafady. Hiakatra ianao ary haka ary hidina. Sarotra lavitra noho izany.
Indrindra rehefa manana baolina lehibe ianao. Tena te-hieritreritra ny hanandrana fotsiny ianao. Ento ny baolina avo araka izay tratranao raha totohondry ianao.
Eny ary, efa azoko izao. Ary midina. Masiaka.
Fanatanjahan-tena fahadimy: crunch oblique amin'ny tongotrao mahitsy. Hataontsika ambony fotsiny ny baolina, ary ho eo an-dohanao izany. Tiako ianao handanjalanja amin'ny tongotra iray.
Tena hieritreritra ny hamely ny oblique fotsiny isika. Ka ho eto isika, ary handeha hitrongy. Raha vitanao izany nefa tsy hikasika ny tany amin'ny rantsan-tongotrao dia tsara izany.
Mahazoa fihenam-bidy tsara eto. Tena tadidio fotsiny ny maninjitra sy mitoto. Hamely ny ilany hafa isika.
Ary eto. Hanary anao amin'ny fandanjalanjana izany. Raha manao an'izany ianao dia tsara izany.
Ary eto. Ary eto. Ary tena mieritreritra ny crunching, mikapoka ireo vatana misavoana ireo.
Tsy dia lanja be izany, fa tena hahatsapa izany ianao. Olo ry havana. Avereno indray, manaova repte betsaka araka izay azonao atao ao anatin'ireo 30 segondra ireo. 15-20 segondra fitsaharana, telo ka hatramin'ny efatra fihodinana.
Tena tsara. Na izany na tsy izany, ny faritra rehetra amin'ny olona tsara rehetra. Raha mbola tsy nanamarina ny ATHLEANXXforWomen.com ianao dia zahao.
Manana fanampiny fanampiny izy ireo. Angamba ianao te-hanitatra androany. Loharanom-pitaovana tsara izy io, tsindrio ny bokotra Subscribe ary tsindrio ny bokotra Like ary hiofana miaraka aminareo aho tsy ho ela.
Hatraiza ny lanjan'ny fanafody fanafody ho an'ny abs?
Ny lanjan'ny fanampianabaolina fanafodyhanome anao fampihetseham-batana mahery vaika kokoa noho ny vitanao amin'ny crunches mahazatra. Mampiasà abaolinamaivana izany mba hahafahanao manao andiany tsirairayFANAZARAN-TENAtsy manelingelina na manangona ny lamosinao. Ny lanja tsara ho an'ny fanatanjahan-tena dia 4 kilaobaolina fanafody(saro-kenatra 9 kilao fotsiny).31 Aogositra 2004
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.COM. Roa herinandro lasa izay dia nomeko fitsapana abs ianao hatao ao an-trano ary ampifandraisiko eto raha tsy hitanao izany mba hahitanao ny tanjaky ny abs anao tamin'ny fitsapana ny fahaizanao, nampiakarinao mahitsy ny tongotrao , manomboka amin'ny toerana ambony ka hatramin'ny santimetatra vitsivitsy miala amin'ny gorodona, ary miverina miverina indray nefa tsy asiana tanana ny lamosinao ambany amin'ny tananao hahatsapa ny nametrahana ny lamosinao ambany fa tsy ny manodidina anao no manohana ny lamosina ambany.
Ary nisy ny olona naneho hevitra tamin'ilay lahatsoratra izay gaga tamin'ny fomba tsotra nahatonga azy ireo hieritreritra fa malemy ny abs-ny, mety izany no nataonao, nihady ny tananao ambanin'ny lamosinao, nanimba ny fahamendrehan'ny fitsapana rehetra. Na dia ampitainao amin'ny loko manidina aza izy io dia tsy azonao atao ny mamaritra ny tena tanjaky ny kibonao mandra-panaonao ny ataontsika eto ankehitriny, midika izany fa tsy maintsy hizaha toetra ny tanjakao kibo mavitrika isika. Mila manandrana ny tanjaky ny hozatra kibo ho azy ianao.
Fa nahoana izany? Satria ny reactive core dia fotony mahery. Jereo, raha eny an-tsaha ianao amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena ary te ho afaka manapaka amin'ny lafiny iray, dia mila manana abs tsy mampino ianao mba hahafahanao mampiorina ny vatanao ary miditra ao anaty indray mipy maso mba hifindra amin'ny toerana hafa. lalana. Rehefa malemy ny abs-nao, dia mikoriana hatrany amin'ny lalana halavinao ianao, ary tsy zavatra tsara izany na dia ao amin'ny efitrano fandanjana aza.
Rehefa manana fahaverezan'ny angovo izay resahintsika matetika ianao, izay midika hoe malemy fototra, ny hery noforoninao nandritra ny famonoana maty, izay natao hiakatra amin'ny tongotra sy ny tongotra hatrany amin'ny vatanao dia mety ho lasa nokleary re maimaimpoana Mba hampivelarana sy hizahana ny tanjaky ny kibonao dia mila mahay manao fanazaran-tena ianao ary anio dia hasehoko anao ny fomba anaovako azy amin'ny baolina fitsaboana. Ary afaka manao kinova 3 mandroso ianao amin'izany, arakaraka ny haavon'ny tanjanao ankehitriny, ny zavatra ataonao dia manomboka eto amin'ny toeran'ny vavony mihohoka. Mihazona ity baolina fitsaboana mitsivalana milanja 12 pounds ity ianao.
Mila mitsambikina ianao ary avy eo sambory izy, ok. Hanketo amin'ny sisiny ary sambory avy eo. Rehefa miteny aho fa eccentric tampoka dia manandrana ny fihenan'ny tsinay sy ny atiny ho azy izahay avy eo.
Raha tratrako ity dia te-hisintona ahy mankany amin'io lalana io aho. Ka hitako fa manomboka mihalefaka ny baolina aorian'ny nahasamboriko azy ary tiako ho tratra eto amin'ny haavon'ny lohako izy, avy eo fantatro fa manana fahalemena aho, ok, tokony horesahiko. Ary te hizaha toetra ny andaniny roa izahay, saingy mety ho hitanao eo amin'ny ilany havanana izany, angamba hitambesatra mihoatra ny havia aza aho.
Ary ny ankamaroany dia mety misy ifandraisany amin'ny tantaranao akory. Nisy hernia teo amin'ny ilako havia izay nodidiana. Izany dia mety hiteraka fahasamihafana hitako ny ankavanana sy ny ankavia.
inona no ataon'ny vinaingitra paoma?
Eny, andao lazaina fa manana izany ianao, tsy olana izany. Ny zavatra manaraka tianao atao dia ny mandray azy ary manaova mavitrika kely kokoa. Ka mitsambikà ka misambotra, ento any afovoany dia miverina midina indray.
Ankehitriny dia miala amin'ny tany ny tongotro amin'izao fotoana izao. Ka midina aho, eo afovoany, ary miverina, afovoany, miverina ary miverina indray, raha malemy aho amin'ity lafiny ity, raha manandrana mahazo ny baolina eto aho, raha latsaka toy izany aho dia tsy ho eto tena mamorona azy. Ary tsy ho tsara tarehy loatra izany.
Ka raha azoko atao ny mitazona azy tsara sy madio satria tsy matanjaka ny abs-ko dia hataoko tsara sy maranitra toa izao. Fa raha manao an'izany aho ary tsy mifanaraka amin'ny azy, dia hiseho izany. Ianao indray dia mizaha ny lafiny havia sy havanana.
Mahafinaritra ihany amin'ny farany. Izao dia vao mainka mipoaka aho. Hanao fihodinana rosiana isika izao.
Hitsambikina, hikasika ary hiezaka ny hiverina eto ianao ary tsy ho very ny fifehezana ny baolina, na koa hitsoraka be loatra amin'ny sisiny. Mipoitra izy ireo, mikasika, ary avy eo mangatsiaka. Mitsambikina.
Mikasika. Ary mangatsiaka. Ahh.
Li aho ka ity no Plyo Twist Rosiana eto amintsika, saingy mifanentana eto tanteraka amin'ny maha-fampihetseham-batana izay tsy vitan'ny hoe mizaha toetra ny tanjatsika ihany koa fa mampatanjaka ny abs. Ary ry havana, izao no fomba fanazaran-tena ataonao toy ny atleta, raha mitady abs mahery matanjaka kokoa ianao izay hiasa amin'ny toerana rehetra ary tsy raharahako na tsy manao fanatanjahan-tena ianao na tsia raha milalao fotsiny ny lalao fiainana, mila manana fototra matanjaka ianao satria tafiditra ara-bakiteny amin'ny zavatra rehetra ataonao izany ary hanampy anao handeha any ATHLEANX.COM aho.
Raiso ny rafitry ny fiofanana ATHLEANX. Avelao aho hampiofana anao amin'ny alàlan'ny fanazaran-tena amin'ny kibontsika tsirairay ary saika ny fampihetseham-batana rehetra ataontsika ary alao antoka fa hataoko matanjaka ianao fa matanjaka toy ny atleta. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia avelao ny fanehoan-kevitrao sy ny thumbs up.
Na inona na inona zavatra hafa tianao ho hita dia avelao eto amin'ny hevitra, hanao lahatsoratra izahay, homenay anao 3 isan-kerinandro, amin'izay aho mety hanana fotoana be dia be hanandramana hanafina izay tianao ho hitanao, okay , Hahita anao hiverina eto tsy ho ela aho.
Inona no atao hoe baolina fanafody habe tsara hanombohana azy?
Vantany vao vonona ny hiasa mafy ianao, ampiasao abaolinaizany dia mavesatra loatra hampihemorana ny fihetsiketsehanao fa tsy hanelingelina ny fihetsika na ny fifehezana anao; ny filankevitra amerikana amin'nyFANAZARAN-TENAmanamarika fa ny 4 ka hatramin'ny 15 pounds dia matetika alanja fanombohana tsara.30 Sep 2019
Hey ry zalahy! Jeff Cavaliere avy amin'ny athleanx.com. Ny tiako hatao eto dia valio izay nangatahinao ary izany dia fampihetseham-batana haingana azonao atao amin'ny fitaovana kely dia kely.
Ka nofitako tamin'ny fitaovana iray monja io ary baolina fitsaboana izany. Ka hampiasa toy ny baolina fitsaboana 12 kilao aho anio, fa raha te-hanomboka amin'ny 4 pounds, 6 pounds ireo singa amin'ny asa no maninona.
Ka andao jerena haingana izay hataoko eto. Te hiantso an'ity ho fanazaran-tena aho hoe '8 dia ampy' satria manao fanazaran-tena 8 fotsiny ianao ary afaka manao na inona na inona. Hanomboka amin'ny tosika mihodina isika.
Hiresaka momba izany afaka iray segondra aho. 20 amin'izy ireo. Ny fanenjehana triceps dia manakaiky ahy hiasa amin'ny lamosin'ny sandriko, 20 amin'izy ireo.
Ny soroka dia manipy ny bala fanafody, ny wiper / crunch combo ahy 10, 25 tsirairay avy amin'ny crunch part, roll squats, tongotra mbola miasa, lunges misy fihodinana ambony, RDL ball an'ny fanafody, manomboka izao amin'ny lamosin'ny tongotra ary hijanona isika miaraka amina kinova mangatsiatsiaka amin'ny curl miaraka amina bala fanafody, tsy hataoko daholo ireo reps ireo satria te-hihazona ny tenako ho fohy aho ary hampiseho aminao ny zavatra rehetra tokony hataonao fa raha te hamerina fotsiny ilay lahatsoratra ianao dia miverena any ny Start ary miato kely ary eto dia omenao ho anao rehetra. Ka avelao aho hanomboka eto. Raisiko ny baolina fanafody.
famerenana rockhopper manokana
Manomboka amin'ny pushups mihodina aho. Midina, avadika, avy eo miampita. 3, 4, 5, 6..dia manao 20/7/8 isika, okay.
Mandehana mankany amin'ny pushup triceps. Tano ny kiho. Mivily kely amin'ny sisiny aho eto.
Ankehitriny dia ampidiniko amin'ny kiho hijanona akaiky io ary miasa eo an-damosin'ny sandriko aho izao. Hoy aho 20 tany. Raha 5, 10 fotsiny no azonao atao, dia izay ihany no azonao atao.
Miasa eo. Eny, midina dieny izao, hanao manipy soroka isika. Fanatanjahan-tena ny vavoninao sy ny atiny.
Mila mipetraka ianao, mitazona ny tongotrao hatrany, ary manitatra ny sandrinao hatrany ambony. Mila manipy mafy ny sandrinao ianao hampiasana ny sorokao manontolo. Ary ahenao moramora ny farango rehefa handeha.
15-20 no nanoratako tao. Reraka. Soraty ny fangaro wiper-crunch.
Atsofohy eo anelanelan'ny lohalinao ny baolina, apetraho, sintomy, atsipazo, sintomy. Iray izany. Manana 10 ianao.
Avy eo apetraho eo amin'ny tongotrao izy, mandanjalanja, atsangano ny tanana, totoina. 25. Zavatra avy hatrany amin'ny haiady.
Izy io dia dikan'ny squat ary maka ny baolina ianao, avelao ny tenanao hiakatra, mifehy, mifoha, ary avy eo miverina avy hatrany. Toa izany eto, mahitsy miadana miadana sy miadana. OK, 15 taona.
Tazomy ambony ilay baolina amin'ny farany. Tongava mahitsy ary mihodina. Tano mafy ny fotony.
Ok, amin'izao fotoana izao ny baolina fanafody dia handeha hiasa ambadiky ny tongotra. Eto sy hatrany ambany. Atosory ny volanao mba hiarina indray.
Midina, mandanjalanja, manosika, miakatra indray. Avelao aho hanondro anao ity lafiny ity. Midina, manosika eto, midina, manosika.
Midina sy miakatra. 10 amin'ny tongotra tsirairay. Ok, midira mahitsy any amin'ny crunches curl ho an'ny sandrinay.
Mety mieritreritra ny olona fa tsy manana bisikileta a. afaka manao spaoro baolina, tsy marina izany. Mijanona eto, miakatra, misambotra, miadana.
Atsipazo indray izany ary manomboka manao ny ampahany sarotra indrindra amin'ny fampihetseham-batana, izay 90 degre eto. 30 amin'izy ireo sy ny sandrinao no ho may amin'ny farany. Ampy izay. Fanatanjahan-tena 8 dia manomboka amin'ny vatanao ambony, miasa ny sandrinao, eo aloha sy aorianao, ny tongotrao, ny soroka, amin'ny fanazaran-tena haingana iray miaraka amin'ny masinina iray.
Ry vahoaka, raha mila fampahalalana bebe kokoa dia tsidiho ny athleanx.com, raiso ny kopian'ny rafitry ny fiofanana ATHLEAN-X anio mba tsy hahazo ny entana tsara rehetra fa programa feno natao nandritra ny 90 andro hahatonga anao hanana endrika tsara indrindra amin'ny fiainanao sy ry havana, tsy programa P90X ity. Mangataka anao aho hampiofana amin'ny havizanana tanteraka mandritra ny 90 andro misesy.
Ireo dia fampiofanana dimy isan-kerinandro misy valiny tsara kokoa. Nosedraina ny sasany amin'ireo atleta sarotra laza indrindra eto an-tany, raiso anio. Ry vahoaka, handeha hiaraka amin'ny sasany amin'ireo fanazaran-tena vaovao aho, ho eto indray.
Hiezaka aho ary hikendry hitondra anao roa isan-kerinandro manomboka izao. Misaotra, miresaka aminao tsy ho ela.
Iza no kettlebells na ball fitsaboana?
Na dia manampy anao mandoro kaloria aza ireo entana roa ireo amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena ny cardio anao, nykettlebellmampirehitra azy ireo haingana kokoa - hatramin'ny kaloria 20 isa-minitra, hoy ny American Council onFANAZARAN-TENA. Ho an'ny olona 155-kilao, mampiasa jirobaolina fanafody, toy ny 8 pounds, dia mety handoro hatramin'ny 112 kaloria ao anatin'ny antsasak'adiny.21 Mey 2019
Handeha hilalao baolina fitsaboana aho. Ka raha manana baolina fitsaboana na kettlebell ianao, dia tohiny fotsiny, io dia fampihetseham-po tsara, hetsika roa fotsiny ho an'ny asan'ny vatana rehetra. Ka raha manana bara fanaovana fanafody ianao dia tazomy ny tananao roa, raha mandray kettlebell ianao dia tazominao ny lakolosy miaraka amin'ny tananao roa mitazona ny tananao mba hifanaraka amin'ny sandrinao tsara ka andao hanomboka amin'ny squats misy tongotra malalaka ny rantsan-tongotro mikorisa amin'ny tongotra ampy tsara aho ka noho ny lafiny hitanao mihifikifika eo amin'ny sisin'ny tongotro dia TSY hidina eto ambany aho okay ka araho ny fonao sy ny sandriko hiakatra amin'ny soroko aza.
Ka raha manana kettlebell ianao amin'izao fotoana izao na raha manana gravity ianao ary raha manana baolina fanafody dia azonao atao ny manomboka manipy azy io na raha manana mpiara-miasa ianao dia azonao atsipy etsy sy eroa amin'ny namanao efatra telo roa ary iray izao. Ny tongotrao somary akaiky kokoa dia mody misy olona mampikatso anao eo anelanelan'ny lohalinao sy ny feny - ity amin'ny fotoana tena izy. Handeha mandroso sy miverina toy ny mandeha milomano ianao ary mitaingina valo miaraka amin'ny baorinao na kettlebell. Miezaha hahatratra fihetsiketsehana maro be handrisihana ny fihenan'ny fotony.
Manaova fihodinana kely eny amin'ny habakabaka, toa fihetsika ho an'ny efatra, telo, roa ary iray, araraoty ny tongotro izao dia raisinay fa mandeha amin'ity pejy iray ity izahay ary avy eo ity ilany midina io dia zarao amin'ny fanafody anao ilay fanafody kely amin'ny baolina na kal tsara voafidy ireto teraka teraka mahitsy sy ambany ireto ary ndao hiodina amin'ny ilany isika mba tsy hahafahan'ny taranja mamonosina azy intsony ny soroka miasa Miasa mandroso sy miverina ny tongotra toy ny hoe milahatra miaraka amina loka ianao amin'ireo telolafy fahefatra ary misy olona mijoro izao miaraka amin'ny tongotrao mandroso, manenjana ny lohalinao, saingy tsy tery, ary atositosika hatrany izy ireo, ka mahitsy fotsiny, mahitsy tsara, ataovy izy ireo Aza atohoka eto ny lohalinao, ny hataontsika dia ento ny baolina na lakolosy amin'ny ilany iray avy eo atsofohy mandra-pahatongan'ny sorokao ny vodin-tsorinao mba ho eo am-pelatananao ity ketanao ity, eto izahay fanafody baolina hijanona eo mandritra ny efatra telo roa ary ny lafiny iray hafa raiso izany midina mifanindry miaraka aoriana ny fisaka, ka ireo no vongan-kazo sy glu tes izay fototry ny efatra roa roa ary iray rehefa mahazo anao Nahavita izany tamin'ny fampihetseham-batana feno tsara aho tamin'ny hetsika vitsivitsy androany, manantena aho fa mankafy ny fampihetseham-batana ianao, azafady mba ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany
Inona ny haben'ny bala amin'ny rindrina tokony hovidiko?
Manana lanjany isan-karazany izy ireo, manodidina ny 6 ka hatramin'ny 20 pounds. Raha ny fisafidianana ny lanja marina nobolan'ny rindrina, ny zavatra voalohany hodinihina dia ny votoatinao sy ny vatanao ambony. Ireo vao manomboka dia mety te-hanomboka amin'ny lanjany maivana mavesatra 6 na 8 pounds, raha toa ka te hanandrana 10 pounds na mihoatra ny ambaratonga fanatanjahan-tena mandroso.11 jol. Desambra 2019
Fa maninona no mafy be ny bala amin'ny rindrina?
Izy ireomafy loatrasatria tsy ny vatanao ambany (mandritra ny squat) fotsiny no ampiasain'izy ireo, fa ny vatanao ambony (mandritra ny press press) no ampiasain'izy ireo ary mahatonga anao misavoana rivotra mandritra ny fotoana rehetra.
Mendrika ve ny baolina Wall?
nybolan'ny rindrinaNy fampihetseham-batana dia mampitombo ny tahan'ny fitempon'ny fonao, mahatonga azy io ho fomba tsara hanatsarana ny fitaizam-panahinao ary handoro kaloria koa. Izy io koa dia manampy amin'ny fampitomboana ny herinao mipoaka, izay singa ilaina amin'ny hetsika ara-panatanjahantena maro.11 jol. Desambra 2019
Mora kokoa ho an'ny olona lava ve ny baolina Wall?
nybolan'ny rindrinamila fohyOLONAhampiakarana mihoatra ny 60% ny vokatry ny angovo azony raha ampitahaina amin'ny squat. Hafa be izany! Mifanohitra amin'izany, aolona lavamila mampitombo ny fivoahan'ny angovo manodidina ny 10% fotsiny raha mampitaha squat amin'ny abolan'ny rindrina.22 Aog 2019
Azoko atao ve ny mampiasa baolina slam amin'ny baolina rindrina?
Ny tena zava-dehibe kokoa,bolan'ny rindrinadia safidy azo antoka ho an'ireo mpampiasa natahotra ny mavesatra mavesatra.Slam baolinadia kely nohobolan'ny rindrinaary matetika vita amin'ny akorandriaka nohamafisina. Natao izy ireo mba hatsipy mafy, na hanohitra ny tany na hamafisinarindrina.18 nov 2020 g.
Mora kokoa amin'ny olona fohy ve ny mipetraka Wall?
nyrindrinabaolina dia mitaky aolona fohyhampiakarana mihoatra ny 60% ny vokatry ny angovo azony raha ampitahaina amin'ny squat. Ka tsy tena momba ny angovo lany. Fa kosa ny fitomboan'ny angovo azo avy amin'ny fampihetseham-batana amin'ny fanaovana squatting izay mahatongarindrinasarotra kokoa noho izany ny baolinaolona fohy kokoa.22 Aog 2019
Ahoana ny fomba hananganana hery lehibe amin'ny baolina fitsaboana?
Ny kitapom-bolan'ny fanafody tsy tapaka dia tsara ho an'ny fotony, saingy ity kinova novaina ity, izay mitazona ny vatana ambany dia tena mikendry ny fotony miaraka amina hery mahery vaika kokoa. Amin'ity fihetsika ity dia tianao ny hitazona ny valahana sy ny lohalika mandritra ny fanatanjahan-tena. Atombohy amin'ny tongotra malalaka ary hazony ny baolina roa amin'ny tanana roa.
Inona no karazana fanazaran-tena ataon'ny bala fanafody?
Ny fampihetseham-batana enina eto ambany dia fifangaroana fanazaran-tena mipoaka sy fihetsika fototra. Hihaika ny vatanao iray manontolo izany ary hikapoka ny fonao, ary ny hany ilainao dia ny baolina fanafody sy ny toerana kely iray. Ary mampanantena izahay aorian'ny fihodinana iray amin'ity fampiofanana ity dia tsy hisalasala intsony ny amin'ny fahombiazan'ny baolina fanafody intsony ianao.
Ahoana ny fomba hanaovana repoblika 10 miaraka amin'ny baolina fitsaboana?
Mijoroa amin'ny sakan'ny soroky ny tongotrao ary ny baolina fanafody mahitsy eo ambonin'ny lohanao. Miondrika eo amin'ny valahanao ary, avelao ny sandrinao hivelatra, atsipazo mafy amin'ny tany araka izay tratranao ny baolina fanafody. Alao ny baolina fanafody ary miverena amin'ny toerana fanombohana. Manaova seta 3 an'ny repoblika 10. 10. Fanohinana